Iyiphi indlela engcono kakhulu yokuthola i-DoF emuva emuva kwe-backlink kuze kube ngu-2019?
Uma kuziwa ku-SEO, umuntu angathola imikhuba ejwayelekile kakhulu nemigomo ethile esebenze iminyaka. Yebo, indawo yanamuhla ye-Search Engine Optimization iyaqhubeka izama ukuvumelanisa nokubuyekezwa okuqhubekayo nokubuyekezwa okukhulu kwe-Google algorithm yokusesha. Noma kunjalo, kunezinye izinkambiso nemikhuba eyatholakala kahle ekusebenzeni eminyakeni yamuva - ngisho ukuthi bangalindelwa ngokucophelela ukuba bagcine amandla abo okuqala, okungenani esikhathini esizayo esizayo. Futhi uqinisile - kunendlela enhle yokuthola i-DoF elandelayo emuva kwe-backlink kuze kube ngu-2019. Ngezansi ngizokubonisa konke mayelana nokuphawula kwebhulogi njengeprothi ukuze uthole lawo backlink afanelekile neDoFollow ngokubuyisela. Ngakho-ke, ake siqale.
Ukubeka amazwana ebhulogi
Leli thuluzi yokwakha ubuhlobo elidumile kulindeleke ukuba libe lusizo ekwakheni i-DoF emva emuva kwe-backlink ngo-2019, njengamanje. Nakhu okumele ukwazi ukuthi usebenzisa le ndlela emangalisayo yokwakha isixhumanisi.
Isinyathelo 1: Ukufaka Isisekelo Esifanele
Okokuqala, ngincoma ukuqala ngamagama angukhiye abalulekile kanye namagama abalulekile. Khumbula - ukukhetha kahle amagama akho angukhiye yinto ebaluleke kakhulu eyenza okuqukethwe kwakho kubonakale ekusesheni kwe-intanethi. Yebo, ukubhala okuqukethwe okukhulu nge-backlink ephezulu kakhulu ye-PR kuzwakala kahle. Kodwa konke ngeke kwenzeke ingqondo ngaphandle kokuthi abasebenzisi bangempela bekusesha imibuzo ephezulu yegama elingukhiye.
Isinyathelo sesi-2: Ukusebenzisa okuthunyelwe okuyiBlog ukuze uthole isixhumanisi emuva
Uma usukhona amagama angukhiye angempela okumele uqale ngawo, kufanele ngiye ukuphawula ngamabhulogi athile aqondene nesihloko sakho esiyinhloko noma niche emakethe. Ngaleyo ndlela, ngincoma ukusebenzisa i-plugin ye-CommentLuv, uhlelo oluhle kakhulu lokubeka amazwana ebhulogi owaziwa kakhulu phakathi kwe-SEO nama-webmasters aqeqeshiwe. Futhi ngikholelwa ukuthi le ndlela esabekayo izobe isebenza ngokusemthethweni ekwakheni i-DoFollow backlink ngisho naku-2019. Konke kusebenza cishe ngendlela ehamba phambili, ngakho-ke akufanele ube nezinkinga zokusebenza nale nsizwa encane.
Isinyathelo sesi-3: Ukugcina amazwana Ngokweqiniso
Futhi lapha singena kumhlangano onzima kakhulu. Ngisho ukuthi kufanele uxwayiswe - into yokuthi ababhulogi bangakwazi ukuqonda ukuthi uvele nje ukuphawula ukuze uthole lezo zinkinga ezifanelekile ze-DoF. Yingakho ukwabelana kwengonyama yamazwana wakho wakamuva kungase kulandelwe futhi ngesaziso esifushane. Ukuvimbela inkambo enjalo yezinhlekelele, ngincoma ukugcina wonke amazwana akho eqiniso. Ngisho lapha kufanele uhlale unesheke kabili sokuphawula kwebhulogi ngayinye ngaphambi kokuthi kuphile. Vele uqaphele ukuchitha isikhathi esincane ukuze ube nakho konke okufundayo - funda ama-athikili ngokugcwele, uphinde ubeke imibono ezwakalayo kuphela engenzi umqondo ophelele kodwa ungathumela inani langempela kubafundi.
Ukwenza kanjalo, ungalokothi uphumelele ngokuveza amazwana amaningi ebhulogi kuma-backlink, ngaphandle uma ufuna ukuphakamisa ifulegi elibomvu nge-Google search engine ngokwayo. Gwema ukubheka okusolisayo nganoma yimuphi umsebenzi ongokwemvelo noma we-spammy. Ekugcineni, ungakhohlwa ukuthi kunezinye izindlela eziningana ezifana nokuhambisa ama-directory e-athikili noma ukuthola ama-backlink kumaforamu. Lezi zindlela ezinhle kakhulu zokwakha isixhumanisi zingalindelwa ngokufanele ukugcina ukusebenza kwazo ekudaleni i-backFink ye-DoFollow eyigugu kuze kube ngu-2019 Source .